News | क्यानसर
News | Tag: क्यानसर
३० वर्ष पुग्नुभयो ? यस्ता समस्या देखिन्छन् ? क्यानसरको संकेत हुनसक्छ
एजेन्सी । ३० वर्ष कटेपछि महिलाहरुको शरिरमा धेरै हर्मोनल तथा फिजिकल परिवर्तन देखिन्छ । यसपछि शरिरको तौल नियन्त्रण गर्न समेत मुस्किल पर्छ । यस्तैमा महिलाहरुलाई क्यानसर जस्तो रोग लाग्ने सम्भावना पनि उच्च भएर जान्छ ।
३० वर्ष पुग्नुभयो ? यस्ता १२ समस्या देखिन्छन् ? क्यानसरको संकेत हुनसक्छ !